आश्रममा बमजनले के के गर्थे ? आनीहरुको खुलासा, राम बहादुर बमजनको आश्रममा पुगेपछि आनीहरुले गरे खुलासा, बमजनसँग कति पटक भेट भयो ?…(हेर्नुहोस् भिडियो) « Onlinetvnepal.com
आश्रममा बमजनले के के गर्थे ? आनीहरुको खुलासा, राम बहादुर बमजनको आश्रममा पुगेपछि आनीहरुले गरे खुलासा, बमजनसँग कति पटक भेट भयो ?…(हेर्नुहोस् भिडियो)
Published : 10 January, 2019 10:14 pm
लामो समयदेखि तपस्यामा बसेको भनी चर्चामा आएका युवा राम बहादुर बमजनको चर्चा थप चुलिंदै गएको छ । उनीमाथी बलात्कार जस्तो जघन्य आरोप लागेपछि उनको चर्चा थप चुलिंदै गएको हो । उनी आज भन्दा करिब १४ बर्ष अगाडी बाराको हलखोरिया जंगलमा तपस्यामा बसेपछि चर्चित भएका थिए ।
उनीमाथी रौतहटकी एक युवतीले बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन् । उनको आश्रममा बस्दै आएकी रौतहटकी गंगा मायाले राम बहादुर बमजनले यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनी राम बहादुर बमजनकै आश्रममा बस्दै आएकी थिइन् ।
उनले सार्वजनिक रुपमै पत्रकार सम्मेलन गरी बमजनले आफुमाथी बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि बमजन आलोचित हुँदै गएका छन् । बमजनमाथी बलात्कार मात्रै नभएर हत्या, अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको र हातहतियार समेत राखेको आरोप लागि रहेको छ ।
उनको बाराको हलखोरिया मात्रै नभएर सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही लगायतका जिल्लामा पनि आश्रम रहेका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा रहेको आश्रममा बस्दै आएका अनीहरुले पनि राम बहादुर बमजनको बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । राम बहादुर बमजनको आश्रममा पुगेपछि आनीहरुले गरे खुलासा, बमजनसँग कति पटक भेट भयो ?…हेर्नुहोस् भिडियो…